व्यवसायीहरू वास्तुप्रति आकर्षित हुँदै गएका छन् : डा. उत्तम उपाध्याय (अन्तर्वाता) « NagarikTimes : National News Portal From Kathmandu
व्यवसायीहरू वास्तुप्रति आकर्षित हुँदै गएका छन् : डा. उत्तम उपाध्याय (अन्तर्वाता)
२३ असार २०७६, सोमबार १६:०९
पछिल्लो समय प्राय जसो मानिसहरु काम गर्ने शिल्शिलामा वास्तुप्रति निकै विश्वास गर्ने क्रम बढ्दो छ ।
ज्योतिषशास्त्रमा वास्तुसम्बन्धी शास्त्रीय नीति-नियमको पालना कसरी गर्नुपर्छ भन्ने विषयको वर्णन पाइन्छ । ज्योतिष र वास्तु विषय फरक भए पनि यी दुई एकअर्काका परिपूरक हुन् । पछिल्लो समयमा वास्तुप्रति मानिसको रुचि बढ्दै गएको छ ।
विशेषगरी निर्माणकार्य गर्दा र व्यवसाय सञ्चालन गर्दा वास्तुविद्को सुझाव धेरै मात्रामा लिने गरिएको पाइन्छ । निर्माण कार्यमा विभिन्न स्थानको निर्धारण कसरी हुन्छ भन्ने तथ्य वास्तुशास्त्रमा पाइन्छ ।
वास्तुको विचार नगरी बनाइएको संरचनामा के–कस्ता उपायहरू अपनाई वास्तु दोषलाई निवारण गर्न सकिन्छ भन्ने उपाय पनि वास्तुशास्त्रमा उल्लेख छ । यसरी बनिसकेको संरचनामा पनि वास्तु दोष निवारणका उपायहरू गर्ने हो भने वास्तु दोष निकै कम हुने वास्तविद्हरू बताउँछन् ।
शिलान्यास गर्ने बेला नै गर्नुपर्ने जग्गाको संशोधन भने पछि गर्न निकै कठिन हुने उनीहरू बताउँछन् । घर निर्माण गर्दा सुत्ने कोठा, पढ्ने कोठा, पूजा गर्ने ठाउँ, पानीको ट्यांकी, ढोका, झ्याल, भान्सा, शौचालय तथा नुहाउने ठाउँ आदिको निर्माण वास्तु सिद्धान्तका आधारमा बनाउनुपर्छ ।
यसरी बनेको घर वा कार्यालयमा बस्नाले सुख, शान्ति र समृद्धि मिल्छ भनेर शास्त्रमा वर्णन गरिएको छ । मानिस जन्मेको आधारमा बनाइने चिना तथा कुण्डलीहरू सबैको फरक-फरक हुने गर्छन् । एक जनाको कुण्डली अरूका लागि प्रयोग गर्न मिल्दैन तर वास्तु सिद्धान्त मिलाएर बनाएको घरले भने त्यस घरमा बस्ने जो कसैलाई पनि राम्रो गर्छ । वास्तु एक जनाका लागि मात्र नभएर सबैका लागि मिल्दछ ।
वास्तु मिलाएर बनाएको घरमा सुख शान्ति र समृद्धि प्राप्त हुन्छ भन्ने विश्वास छ । पछिल्लो समयमा विशेषगरी व्यावसायिक क्षेत्रमा लागेकाहरूले वास्तु मिलाएर आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्ने गरेका छन् । यो प्राचीन पेसा हो, तर अहिले यसलाई कतिपयले ठगीखाने माध्यम पनि बनाएका छन् । तर, यसले वास्तुप्रति मानिसको मोह बढ्दै गएको प्रस्ट हुने बताउँछन् वरिष्ठ वास्तुविद् डा. उत्तम उपाध्याय न्यौपाने ।
पूर्वीय दर्शन विद्यापीठ कोलकाताबाट २०७२ सालमा वास्तुशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका उपाध्याय पछिल्ला दिनमा निकै व्यस्त वास्तुविद्का रूपमा परिचित छन् । तराई टिभी, कान्तिपुर टिभी, युट्युब लोचन टिभीमा वास्तुसम्बन्धी विषयमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिसकेका उनले पछिल्ला दिनमा नेपाल टेलिभिजनमा समेत वास्तुसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । उनै वास्तुविद् उपाध्यायसँग वास्तुका विषयमा कारोबारले गरेको कुराकानीको सार :
वास्तु र ज्योतिषमा केही फरक छ । वास्तु नितान्त वस्तुपरक विज्ञान हो, तर ज्योतिष ग्रह गतिका स्थितिको गणक विज्ञान हो । वास्तु वस्तुमा मात्र नभएर सम्पूर्ण चराचर प्राणीमा पनि लागू हुन्छ । साथै देशको भौगोलिक आधारलाई मानेर वास्तुको मिलन रहन्छ । तर, ज्योतिषभित्र सिद्धान्त, फलित, गणितदेखि लिएर अन्य हाँगाबिँगाहरू ज्योतिष विज्ञानमा रहन्छन् । जसमध्ये गणित विज्ञानको फल चाहिँ सत्य, तथ्य र यथार्थ हुन्छ ।
हुन त पहिलादेखि नै यो वास्तुको विषय महत्वपूर्ण थियो । तर, मान्छेको बुझाइको कमीका कारण यसको पालना निरन्तर रूपमा हुन सकेन । दोस्रो विश्वयुद्धपछि वास्तुमा केही कमी भएको अवस्था देखिन्छ । त्यसपछि फेरि वास्तुले मानिसको जीवनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । मानिसले यसलाई महत्व दिन थालेका छन् । अहिलेको अवस्था भने यो मोहमात्र नभएर सञ्चार जगतका कारण पनि यसको मोह बढ्दै गएको पाइन्छ ।
अझ बढी वास्तु महत्वपूर्ण व्यवसाय बनेको छ । किने भने व्यवसाय फरक-फरक प्रकृतिका छन् । कोही अग्नि तत्वको व्यवसाय छ भने अग्नि कोणमा राख्नुपर्ने हुन्छ । कोही जलतत्वको व्यवसायमा छ भने जलतत्वमा राख्नुपर्छ । पानीको व्यवसाय गर्नेले पूर्वउत्तरमा राख्नुपर्छ । व्यवसायको प्रकृतिअनुसार फरक–फरक कोणमा व्यवसाय गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो कोण नमिल्दा पनि व्यवसाय असफल हुन्छ । कोण नमिलाएका कतिपय व्यवसाय धराशायी भएको अवस्था पनि छ । यस्तो भएको थाहा पाउन थालेपछि धेरै व्यवसायीले वास्तुसम्बन्धी जिज्ञासा राख्दै त्यसप्रति आकर्षण भएको पाइन्छ ।
तर मुलुकका केही प्रसिद्ध संरचनाको वास्तु पटक्कै मिलेको छैन । जस्तो मुलुक संघीयतामा गएपछि प्रदेश विभाजन गर्दा प्रदेशको संरचना मिलेको छैन । प्रदेश २ र ५ को संरचना वास्तुअनुसार मिल्दै मिल्दैन । साथै राजधानीका विषयमा पनि प्रदेश १, ३, ५ र ७ को वास्तु मिलेको छैन । ती राजधानीको संरचना वास्तुअनुसार पटक्कै मिल्दैन । त्यसका साथै पुराना संरचनामा नारायणहिटी दरबार, सिंहदरबार, संसद् भवनको वास्तु मिलेको छैन । प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबार र प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको पनि वास्तु मिलेको छैन ।
सोही कारण अहिले पनि ती स्थानमा सधैं विवाद, झैभगडा हुने गरेको छ । गर्न खोजिएको काम तत्काल हुनसकेको छैन । राजदरबारमा भएको वीभत्स हत्याकाण्ड पनि वास्तु नमिल्दाको परिणाम हो भन्ने लाग्छ । ठूलो भौतिक संरचना निर्माण गर्दा होस् या मानिसले आफ्नो बास बस्नका लागि बनाएको झुपडी नै किन नहोस् वास्तु मिलाएर बनाएको छ भने त्यसले निकै शान्ति कायम गन मद्दत पुग्छ । वास्तु नमिलाई बनाइएका आवासमा सधैं झगडा, किचलो मात्र हुँदैन सम्पन्नता पनि कहिल्यै हुन सक्दैन । संरचनाहरू ऊर्जा सञ्चय हुने खालका हुनुपर्छ । ऊर्जा गएमा त्यस घरका सहसमेत बाहिरिन्छ । त्यसैले समृद्धि पाउन सकिँदैन ।
वास्तु कुन-कुन क्षेत्रमा प्रयोग हुन्छ ?
पूर्व र उत्तर दिशाको बीच भागलाई इशान कोण भनिन्छ । इशान दिशामा बनाइएका कोठाहरू सकेसम्म थोरै क्षेत्रफलको बनाउनु राम्रो मानिन्छ । यसको विपरीत इशान कोणका कोठाहरू ज्यादै ठूलो भएमा पनि यसले त्यस घरमा बस्नेलाई अनेक प्रकारका समस्या दिने वास्तु शास्त्रको मान्यता छ । इशान दिशालाई देवभूमि भनिन्छ । यस दिशामा देवताको पूजाआजा गर्ने ठाउँ बनाउनुपर्छ । यदि घरको अन्य भागमा पूजा गर्ने ठाउँ बनाइएको छ भने पूजा स्थललाई इशान कोणमा नै ल्याउनुपर्छ ।
त्यसैगरी पढ्ने तथा पढाउने कामकाजका लागि पनि इशान दिशा नै प्रयोग गर्नु भन्ने निर्देशन वास्तु शास्त्रमा गरिएको छ ।
इशानकोण देवताको स्थान भएकाले यस दिशामा फोहोरहरू राख्ने गर्नु हुँदैन । यस कोणलाई सधैँ सफा राख्नाले घरमा सकारात्मक ऊर्जाहरू आउने वास्तुको मान्यता छ । साथै यस दिशामा अत्यधिक ग(हौं र धेरै भार भएका सामग्री पनि राख्नु हुँदैन । यस दिशालाई सकेसम्म सफा र खाली नै राख्नु राम्रो हुने गर्छ । कारोबार दैनिकबाट साभार
प्रकाशित मिति: २३ असार २०७६, सोमबार १६:०९
वृश्चिक राशिको शुभ-अशुभ : शुक्रबारको दिन किन काम गर्नु हुदैन ?
हेर्नुहोस् आजको राशिफल : मिथुन भाग्योदयकारक, वृश्चिक काममा ढिलासुस्ती
आज मिति २०७६ भदौ ९ गते सोमबार, ज्योतिष शास्त्रअनुसार यस्तो रहनेछ तपाईको आजको दिन –